Sharuucda Fekradaha Laacib.net | Laacib.net
Sharuucda Fekradaha Ama Aragtiyada.
Fekradaha laga dhiibto wararka aan soo qorno waxaa loogu talo galay in akhristayaasheena ay kaga jawabaan ama aragtiyadooda ka dhibtaan wararka maalintaas soo baxa, islamarkaana ay wadaagaan ama isweydaarsadaan fekrado kala duwan, wax ka bartaan ama qibrad la xiriirta isbrashada iyo furfurnaanta ka helaan.
Laacib.net mas\_’uul kama ahan fekrad kasta oo uu qof soo qoray.
Fekradaha lama fiiri doono inta aan la soo bandhigin ka hor. Si kastaba, waxaan xaq u leenahay inaan masaxno ama tirtirno, waxaan sidoo kale xaq u leenahay inaan akhristayaasha qaarkood ee sharuucdaan ku xadgudba inaan ka u diidno inay fekrad kale dhiibtaan hadii lagama maarmaan ay noqon weyso.
7 sharci oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor inta aadan fekrad qorin:
Waan masixi ama tirtiri doonaa:
Hadii fekradaada ay ku jirto hadalo aflagaado ah, hadii ay ku socon laheyd shaqsi, ciyaaryahan ama koox, waan masixi doonaa. hadii fekradaada aan ka helno hadalo cunsiriyad ah ama isir naceyb ah ama hadalo abuuri kara in isnaceyb iyo aflagaado.
Hadii fekradaada ay ka hadloyso wax sharci darro ah, ama lagu soo bandhigayo wax aan ku habooneyn diinta iyo soomaalinimada.
Hadii fekradaada ay ku dhex jirto taleefan ama cinwaanada aad adiga leedahay ama links.
Hadii fekradaada mar hore ay soo muuqtay lakiin aad mar kale soo gelisay.
Hadii fekradaada ay ku jirto xayaysiin ama dacaayad aad u sameyneyso waxyaabo ganacsi ah.
Hadii Fekradaada ay iska dhigeyso qof kale, ama aad adigaba iska dhigeyso inaad qof kale tahay.
Hadii magaca fekradaada uusan micno sameyneynin oo aan u aragno inuu yahay mid aan habooneyn.
Mararka qaar waxaa dhici karta adigoon ku xadgudbin sharuucda kore, in fekradaada soo muuqan weyso, waxba ha ka walwalin sida ugu dhaqsiyaha badan ayay u soo muuqan doontaa marka aan anaga soo ansixino.
Laacib.net ma soo bandhigi doonto fahfaahintaada shaqsiyadeed, sida Email-kaaga, waxaana Fekradaada ka muuqan doona kaliya magaca aad ku soo dhiibatay.
Fekradahaada waxaa laga yabaa inaan u isticmaalno siyaabo kale duwan, hadii ay ahaan laheyd xayaysiis, waxaan leenahay xuquuqda aan ku minguurin karno fekradaada.
Hadii aad qabto wax su\_’aal ah ama aad raadineyso faahfaahin dheeri ah, inoogu soo dir [email protected]
Abdi Aziz Golf
WARARKA MAANTA	Cesc Fabregas Oo Tababarihiisa Mourinho Ku Taageeray Inuu Yahay Tababaraha Ugu Fiican Ee Sixi Kara Dhibaatada Chelsea Isaga Oo Sheegay In Mourinyo Uu Yahay Tababaraha Aduunka Ugu Fiican
Kooxda Gobalka Sanaag Oo Taako Kala Kulantay Dhigeeda Gobalka Saraar Iyo Gabiley Oo Barbaro Gool La’aan Ah La Gashay Gobalka Saraar